anti-ငြိမ် PVC အထည်အလိပ်မြန်နှုန်းမြင့် Rolling ရှပ်တာတံခါးကို China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:အစာရှောင်ခြင်းအလိုအလျှောက် PVC အထည်အလိပ် Shutter တံခါး,မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းလုံခြုံရေးစက်မှု Rapid တံခါး,internal ဂိုဒေါင် PVC တံခါး
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး > anti-ငြိမ် PVC အထည်အလိပ်မြန်နှုန်းမြင့် Rolling ရှပ်တာတံခါးကို
PVC မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးများတံခါးဖွင့်ထားနှင့်နီးစပ်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်လွတ်မြောက်ရန်နိုငျသောလေထုလဲလှယ်ပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်စွမ်းအင်ချွေတာတိုးမြှင့်။ အစဉ်အလာခက် bi-နှုတ်ဆက်စကားတံခါးများ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တံခါးကိုနှင့်အခြားလိပ်-up, တံခါးများနှင့်မတူဘဲ forklift သက်ရောက်မှုကိုဆီးတားနိုင်စွမ်းရှိသည်နှင့်လက်ျာဘက်ပြန်သူတို့ရဲ့အပုဒ်သို့ဖမ်းယူ။ ဤသည်ပျက်စီးသွားသောတံခါးများသိသိသာသာကျချိန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကိုဆိုလိုနိုင်ပါတယ်ရှိရာဂိုဒေါင်တစ်ခုအာကာသအတွင်းကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါပြေးမြန်နှုန်းရိုးရာ roller ရှပ်တာတံခါးကိုအဖြစ် 10 ကြိမ်2မီလီယံ / s ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသိသာတဲ့ကဖြတ်သန်းထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ခြုံငုံ output ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။
အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးအကြိမ်ရေမဆိုအမှားမပါဘဲတစ်နေ့လျှင်ထက်ပိုမို 1000 ကြိမ်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်အချို့သောဒေသများရှိမိုးသည်းထန်စွာအသွားအလာလိုအပ်ချက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
3. High-level ကိုအလိုအလျောက်
အလိုအလျောက်ရေဒါသို့မဟုတ်အခြားသော devices oor ၏အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုသဘောပေါက်, တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအလိုအလျောက်အဆင့်နှင့်အလုပ်ထိရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။
4. Excellent ကဘေးကင်းလုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို
dual ကာကွယ်မှုဒီဇိုင်း။ တိုင်းတံခါးကိုတိုက်မှုမတော်တဆမှုရှောင်ရှားဘေးကင်းလုံခြုံမှုဓာတ်ပုံကို sensor နဲ့နီးကပ်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်ဖြတ်သန်းလူ့သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေပါသည်
5. ထိရောက်သော insulator တွင်လည်း
အစာရှောင်ခြင်းအဖွင့်နှင့်အပိတ်ပွဲကနေအကျိုးအမြတ်ကြောင့်မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပအကြားလေကြောင်းစီးဆင်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အခန်းဝင်ထံမှမြေမှုန့်ကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, စွမ်းအင်အပူ conduction လျှော့ချခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ဖြစ်ပါတယ်။
အစားအစာတန်းနှင့် GMP စံနှင့်အတူငျြ့သုံး 6.
အထူးဒီဇိုင်းတံဆိပျကိုဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ PVC ထည်မြေမှုန့်-အထောက်အထားနှင့်သန့်ရှင်းရေးတို့အတွက်လွယ်ကူသည်။
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဓာတ်ပုံကိုအာရုံခံကိရိယာ။ တံခါးကိုအောက်မှာလူ့သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်လည်းမရှိတဲ့အခါ, တံခါးကိုပိတ်ရပ်တန့်နှင့်အလိုအလျှောက်တက်ရလိမ့်မယ်။ ဒါဟာမတော်တဆထိခိုက်မှုဝင်တိုက်ခြင်းမှရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်။
လုံခြုံရေး Roll Up ကိုမြန်လှုပ်ရှားမှုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစာရှောင်ခြင်းသရုပ်ဆောင် roller ရှပ်တာတံခါးကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PVC လျင်မြန်စွာလိပ်တက်တံခါးကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PVC မြန်နှုန်းမြင့်ကိုလှိမ့တံခါးကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစာရှောင်ခြင်းအလိုအလျှောက် PVC အထည်အလိပ် Shutter တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းလုံခြုံရေးစက်မှု Rapid တံခါး internal ဂိုဒေါင် PVC တံခါး လျင်မြန်စွာအလိုအလျောက် PVC အထည်အလိပ် Fast တံခါး အစာရှောင်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုအလိပ်တံခါး စက်မှုအလိုအလျောက် PVC အထည်အလိပ်တံခါး အစာရှောင်ခြင်းကြိတ်စက် Shutter တံခါး အစာရှောင်ခြင်းလှိမ့စက်မှုလုပ်ငန်းတံခါး